WONKE AMAKHASIMENDE WEMikhiqizo
Fix Seal kanye nama-Petroli
Indwangu: U-100% uvolo, i-100% i-polyester noma inhlanganisela
Ubunzima:1mm ~ 70mm
Ubukhulu: oyindilinga, oyisikwele okwenziwe umugqa, emuva noma ngaphandle kokunamathela emuva
Umbala: mhlophe, grey noma usiko
Ubuningi befayibha esetshenziselwe ukucindezelwa baziva ngoboya. Imicu yoboya inamabha amancane kuyo, esiza ezintweni ezivaliwe noma ezikhipheni ngokwemvelo.
Uboya obucindezelwe benziwa ngenqubo eyinkimbinkimbi evame ukubizwa ngokuthi “ukucubungula okumanzi”. I-Fibers isetshenziswa ndawonye ngokucindezela, umswakama, nokudlidliza, bese kubekwa amakhadi futhi kudwetshwe ukuze kwenziwe izingqimba eziningi zezinto ezibonakalayo. Ubukhulu bokugcina nobukhulu bokubalulekile kwento bunquma inani lezendlalelo ezibe ezinamanzi, ezimanzi, ezicindezelwe nezenziwe lukhuni.
I-Thick Polyester Felt / Tension Pad /
Umshini we-strip slitting Machine wazizwa / umshini we-strip slitting Machine wazizwa ngokukhethekile, / ukungezwani kweshidi lensimbi, okungafinyelela ubude obuchaziwe futhi kungasetshenziselwa ibhande lokugoqa lesikhumba kanye nebhande lokufaka iphepha ngokulondolozwa okuhle kokushisa.
Kwenziwe ngemizwa yokwemvelo, ethambile nenemvelo enobungane
Indwangu: I-100% i-polyester, u-100% uvolo, noma ixubekile
Ubunzima: 2mm ~ 5mm
Uhlobo lwentengiso: ifekethisiwe, iphrinta, ilebula elukiwe
Ubukhulu:I-18cm * 9cm * 0.5cm, eyenziwe ngokwezifiso
Umbala: grey, mnyama, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, njll
I-fiber Ac Acic yifreyimu yokwenziwa eyenziwe kokuqukethwe kwePolyacrylonitrile noma i-acrylonitrile ngaphezu kwama-85% (isenti samaphesenti) i-acrylonitrile Copolymer.
Igama lomkhiqizo: I-Hanging Planter
Indwangu: UPolyester Feltxuy
Ubukhulu: I-100 * 30cm noma egcizelele
Ubunzima: I-3mm noma eyenziwe ngokwezifiso
I-logo: Kwenziwe ngokwezifiso
Umbala: Okuluhlaza okomnyama noma okwenziwe ngokwezifiso
Umsebenzi: I-Durable / Eco-friendly
Ukupakisha: Izikhwama eziphikisayo + iCarlon
Ngemuva kwenkonzo: Yebo
Isikhathi sesampula ezinsukwini ezingama-1-2 zokusebenza ngemuva kokuthola inkokhelo
Ukuhanjiswa okubonakalayo: DHL, FedEX
Inaliti Yohlotshaniswa Ngoboya
I-Wool Blend Craft Felt yethu inhlanganisela yoboya obungama-30% no-70% rayon / viscose, okunconywe njengokuthi izikebhe ezisezingeni eliphakeme zizwakala kakhulu noma ezinye izindlela ezingafani nezingu-100% zoboya bezizwa. I-Premium Felt inobukhulu obukhulu bemicu, enikezela ukuthungwa okubushelelezi, okufana nendwangu nombala ocebile. Iphinde ihlangabezane nezindinganiso ze-Oeko-Tex, okwenza iphephe ezinganeni nasezinganeni. Dala izembatho, amathoyizi, ubuciko, nezandla ngenqwaba yemibala egqamile ongakhetha kuyo. Ngokuxubana kwefemikhali yamakhemikhali novolo, kungenza umfutho ...
Isayizi ejwayelekile: 3x12cm noma i-Material Polyester eyenziwe ngokwezifiso yazizwa (3mm), uboya buzwa i-Logo Silk yokuphrinta, ukuphrinta okudlulisa ukushisa, i-embroidery ect Attachment eyeletlet + iron slipt ring (dia 25mm) Colour Pantone color Shape round, star, rectangel, skwele, oval , imilobo yenhliziyo ect. I-OEM Yamukela Ubunzima be-2-4mm Artwork format: i-JPG, i-PDF, i-AI, i-EPS, i-GIF njll izesekeli: I-Metal Hook / i-Breakaway barkle / isiqeshana sokuphepha / i-Crimp / donsa reel / J hook nokunye oku-Eco-friendly: Sebenzisa i-Ink Friendly Ink nezinto ezibonakalayo. ..